Palestina: Matory Ary Fohazin’ny Fipoahana Ny Ao Gaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Desambra 2011 12:35 GMT
Ny fahanginan'izao tontolo izao amin'ny fanafihana tsy an-kiato an'i Gaza dia niteraka hatezerana mafy tamin'ireo mpampiasa aterineto ao amin'ny Twitter, izay niampanga fa tsy mijery ireo Palestiniana ho toy ny olombelona intsony izao tontolo izao.
Manamartika i Abou Charlie :
@Abou_Charlie: Zavatra tsara ny tsy maha-olombelona ny Palestiniana, fa raha tsy izany dia tokony hitandrina ianao #Gaza amin'izao fotoana izao dia voadaroka baomba. Tena mahasorena izany!
Tunisian Tounsia Hourra (Toniziana Malalaka) dia manolotra [ar]:
@tounisiahourra: Zary zava-mahazatra ny fandarohana baomba an'i Gaza. Matory ny rehetra amin'izao fotoana izao. Aza manahiran-tena amin'izany vaovao efa ntaolo izany. Miandrasa ny Zoma fanohanana an'i Palestina, ho amin'ny Fanafahana ny Jerosalema sy ny diabe mba hiarovana ny Al Aqsa
Ary dia manampy i Leil-Zahra Mortada:
@LeilZahra: vaovao mikasika fipoahana & maratra avy any #Gaza – tsy misy na inona na inona any amin'ny fampahalalam-baovao goavana, nefa mampaneno ny fanairana ireo mpitoraka bitsika any an-toerana! #Palestine
Ireo fihetseham-po ireo dia taorian'ireo vaovao momba ny nanafihan'i Israely ny Lemak'i Gaza tamin'ity maraina ity , izay nitarika fahafatesana olona iray sy dimy naratra. Voalaza ho mpikambana ao amin'ny Borigady ny Al Quds, ilay elatra mitam-piadian'ny fikambanana Islamista Palestiniana Jihad Islamika avokoa izy ireo.
Avy any Gaza, ny mpitoraka bilaogy Omar, izay milaza ny tenany ho mpanao gazety sy mafana fo ho amin'ny fandriampahalemana, manome vaovao tsy tapaka ho antsika mandritra ny fanafihana avy amin'ny alàlan'ny kaonty Twitterany. Nanazava izy:
@Omar_Gaza: Vao avy naheno fipoahana! #Gaza
Ary dia nampiany:
@Omar_Gaza: Amin'izao fotoana izao dia maheno ireo fiarakodia mpamonjy voina taorian'izany fipoahana goavana izany! #Gaza
@Omar_Gaza: Maheno anjombona maro aho! #Gaza
Dima, mbola any Gaza ihany, nitoraka bitsika momba ny niainany nandritra ny fanafihana. Nanoratra izy:
@dimaeleiwa: henoko ireo fiaramanidin'ny tafika Israeliana misidina manerana an'i #Gaza … tsara kosa izany alina mipoapoaka izany koa !!!
@dimaeleiwa: ny zavatra tsy tiako amin'ireo “alina mipoapoaka”, raha andeha hatory aho dia misy fipoahana mety hanaitra ahy !! #Gaza
Tsy fantatsika ny fandehan'ny alin'i Dima, fa tamin'ity maraina ity, nitoraka bitsika izy:
@dimaeleiwa: misaotra anao ry F16 nanaitra ahy :/ ~~ #Gaza
@dimaeleiwa: Naheno basy nipoaka aho. Sento #Sigh #Gaza
Ny bitsiny farany dia milaza:
@dimaeleiwa: #ThingsThatShouldSTOP Bombing (ZavatraTsyMaintsyATSAHATRA ny Daroka Baomba) #Gaza sy ny famonoana olona tsy manan-tsiny !